Ka 17, 2018 admin
NYC mgbanwe Genesis enweta BitLicense
Genesis Global Trading enwetawo a BitLicense si New York obodo si Department of Financial Services (DFS), na-eme nanị ihe ọ na-ise ike afọ atọ na-enweta ndị controversial ikike.
The mgbanwe nleghari ka elu net uru na institutional investors na-enye 24/7 trading na Bitcoin, Litecoin na ndị ọzọ.
Àmụmà netwọk na-etolite ọzọ siri ike
The Lightning netwọk na-eto eto. The ọnụ ọgụgụ nke ọnụ e amụba na n'oge gara aga ọnwa atọ, dị ka nke a eserese egosi tụnyere February 2018 na May 2018.
Nlereanya a na-egosiputa ọnụ ọgụgụ nke ọnụ nke nwere ike ibu ezubere iche ma ọ bụ mie na LN si iguzogide a, na-egosi na % nke netwọk na ka ga-arụmọrụ, na-egosi ịba ụba decentralization nke LN.
The otutu mmadu kwenyere na-àmụmà netwọk ka toro na mma si February na May.
Sberbank enwezu Russia mbụ nkekọ azụmahịa iji blockchain
Russian akụ Sberbank na telecoms ike MTS nwere mụụrụ ihe ha na-ekwu bụ mba mbụ azụmahịa nkekọ azụmahịa mere iji blockchain.
MTS mara ọkwa Tuesday na ọ enịm azụmahịa nkekọ nke 750 nde rubles ($12.11 nde), na isi asịwo ịbụ Sberbank, eji a proprietary blockchain ikpo okwu nyere site National Bi Depository.
Andrey Kamensky, VP nke ego, investments na M&A na MTS, kwuru na ihe ịga nke ọma blockchain azụmahịa e rụrụ site “dum mmezi yinye, si nche pụrụ isi chọta na ego nnata ka mmezu nke ihe nile ọrụ na ọṅụ.”
Marsh, a zuru ụwa ọnụ ụzọ ...
ngọngọ yinyemgbanweozin'elu ikpo okwutrading
Previous Post:Blockchain News 16.05.2018
Next Post:Olee otú otu ịkọ omume nke na ọnụego nke a cryptocurrency na okwu nke ọnụ ọgụgụ nke iwu enịm?
Ka 22, 2018 na 1:50 AM
Madlyn Gallant kwuru:
Ka 24, 2018 na 9:43 PM
June 17, 2018 na 6:16 PM